Bacaha mesh, Bacaha -xidhka leh, Bacaha Jumlada ah, Pp Webbing - Zhensheng
Alaabada la Habeeyey
Alaabada badhkeed la dhammeeyay
Bacda mesh yar
Bacda saafiga ah
Tan iyo markii la aasaasay, balaastigga Zhensheng wuxuu diiradda saarayay bacaha weelka, bacaha dhogorta leh, bacaha mesh, webka pp, duubka dharka PP, dahaarka iyo alaabada kale ee baakadaha si loo xaliyo xalalka baakadaha kala duwan ee macaamiisha
Tanyo bacaha ah
Toonnada bacaha ayaa ku habboon in la raro oo la qaado alaabada budo ee waaweyn. Waxay leeyihiin astaamaha mugga weyn, culeyska fudud, iyo raridda iyo dejinta fudud. Waxay ka mid yihiin qalabka wax lagu duubo ee caadiga ah. Waxaa lagu gartaa qaab -dhismeed fudud, culeys khafiif ah, isku laaban, iyo meel yar oo ay deggen yihiin faaruqintu.
Bacaha weelka caagga ah ee suufka ah ayaa si weyn loogu adeegsadaa badaha, baakadaha gaadiidka, waxsoosaarka warshadaha iyo beeraha, baakadaha badeecadaha biyaha, baakadaha quudinta digaagga, qalabka daboola beeraha, hoos-u-dhaca qorraxda, dabaysha-ka-hortagga, daadinta barafka-barafka iyo qalabka kale ee beerista dalagga.
Alaab cusub oo PP ah, iyadoo la adeegsanayo alaab ceyriin ah oo cusub oo PP ah, ur ma leh, iska caabinta jeexjeexa, badbaadada iyo ilaalinta deegaanka. Cufnaanta tolidda ayaa is haysta, mashiinka isku-dhafan ee isku-dhafan ee isku-dhafan ayaa ah mid adag, awoodda xamuulkuna waa xoog badan tahay mana fududa in la jabiyo siligga. Meesha la jeexay waa mid hagaagsan oo isku mid ah, mashiinka farsamada casriga ah ayaa la isku daray si loo gooyo, iyo kuleylku waa xitaa oo meesha la jeexay waa mid hagaagsan oo ma fududa in la sawiro.
Waxaa jira boorsooyin kala duwan. Bacaha mesh ayaa loo qaybiyaa bacaha mesh -ka yaryar iyo bacaha mesh -ka waaweyn. Bacaha mesh -ka yar waxay tixraacaan bacaha mesh ee loo isticmaalo in lagu xiro waxyaalo yar yar sida "Grapefruit, alaabta carruurtu ku ciyaarto, waxyaabaha la isku qurxiyo", iyo bacaha mesh -ka waawayn waxay tixraacaan bacaha mesh -ka waaweyn. Bacaha sida "bacda mesh shaashadda wareegsan, bacda mesh xariir ah". Qalabka bacda mesh guud ahaan waa baco sida polyetylen ama polypropylene.
Xalka xirxirida ubaxa leh ee Ganacsiga Caalamiga ah Co., Ltd. waa soo saaraha bacaha tan, bacaha weelka, bacaha la tolay, bacaha mesh, tarpaulin iyo alaabooyinka kale ee baakadaha. Tan iyo markii la aasaasay, shirkadeena waxay diiradda saareysay xallinta dhibaatooyinka gaadiidka iyo baakadaha macaamiisha muddo 30 sano ah. Hadda waxaan u adeegnaa shirkado badan oo caan ka ah dalal kala duwan waxaanna leenahay shuraako badan oo aad u fiican adduunka. Waxaan u dhoofinnay Ameerika, Australia, Afrika iyo waddamada Koonfur-bari Aasiya, Shirkado badanna waa iskaashi muddo dheer ah, tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay had iyo jeer u hoggaansamaysaa tayada ku saleysan, daacadnimada sida asalka mabaadi'da ganacsiga, ujeeddada ganacsi ee shirkaddu waa : in lammaane kasta la siiyo barnaamijka iskaashiga ugu tartanka badan, si kor loogu qaado horumarka iyo ballaarinta ganacsiga ee lammaane kasta.
Dhibaatooyinka u baahan feejignaan xagga raridda iyo dejinta bacaha weelka
Marka la isticmaalayo bacaha weelka, waa inaan fiiro gaar ah u leenahay habka isticmaalka saxda ah. Haddii la isticmaalo, kaliya ma soo gaabin doonto cimriga adeegga bacaha weelka, laakiin sidoo kale waxay keenaysaa burbur iyo khasaare ba'an marka la adeegsado. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago dhinacyo ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho ...
Haddii aad rabto inaad ka ogaato bacaha tan, fiiri
Maaddada bacda tan ayaa aad u xoog badan, dhab ahaantii, kharashku aad uma sareeyo, waxaana si weyn loogu adeegsadaa saadka, dhismaha iyo beeraha kale. Markaa aan baranno bacda tan xigta. Bacaha weelka caaga ah ee caadiga ah oo sawir qaada bacda ton (sidoo kale loo yaqaan bacda weelka / boorsada bannaan / 1 dabacsan ayaa ku jira ...
Bacaha weelka cagaaran waxay isku dayaan inay abuuraan alaab ceeriin ah si ay badeecadaha uga dhigaan kaarboon iyo ilaalinta deegaanka
Maalmahan, ilaalinta deegaanka ayaa qof walba aad u qiimeeyaa. Waxaan kaloo muhiimad weyn siinnaa soo saaridda bacaha weelka. Kaliya maahan habka la cusbooneysiiyay, laakiin sidoo kale agabyada ayaa la hagaajiyay. Maxay noqon doontaa horumarinta bacaha weelka mustaqbalka? Aan ku baro, si ...
Taleefan ： +86 0535-6886671/ 8613686381999
Iimayl ： katherinez@ytzhensheng.com
Cinwaanka ： Dhismaha 2, Runhua Building, Yingchun Street, Degmada Laishan, Magaalada Yantai, Gobolka Shandong, Shiinaha